Koh Samui ~ Journey-Assist - Ny fijery amin'ny tora-pasika rehetra. Photo.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Koh Samui
Fialan-tsasatra amin'ny Samui
Samui no mandray ny laharana faha-3 eo amin'ny faritra manerana ny nosy Thailand rehetra, ary eo ihany koa ny toerana faha-2 malaza eo amin'ireo trano fandraisam-bahiny any Thailand (ny Phuket ihany no ambony kokoa amin'io lafiny io an'i Samui). Ity nosy ity dia ao amin'ny faritra atsimon'ny firenena dia 700 km miala any Bangkok ary 40 km miala ny morontsiraka atsinanan'i Thailand. Samui dia 21 km ny halavany ary 25 km ny halavany. Manodidina azy io dia misy nosy kely sy ireo nosy lehibe maro toy ny Koh Pha Ngan (izay fantatra eran-tany ho an'ireo antoko misokatra malalaka), Koh Tao (ivon-javamaniry lehibe indrindra manerantany) sy Koh Nang Yuan.
Ity nosy ity dia mirehareha ny fotodrafitrasa mpizahatany efa voavoatra. Misy zavatra rehetra ilainao amin'ny fialan-tsasatra amin'ny karazana karazana, fa ny tena mety amin'ny Koh Samui dia fialantsasatra amoron-dranomasina. Ny trano fandraisam-bahiny eto dia samy hafa be, miainga avy amin'ny trano fandraisam-bahiny tsy manam-paharoa ka hatramin'ny trano lehibe 5 misy kintana. Betsaka ny trano sy trano tsy miankina amin'ny torapasika no hofaina.
Inona no atao amin'ny Koh Samui
Ny lanjan'ny Samui dia azo raisina ho toy ny tora-pasika madio tsara tarehy, mihodidina ny nosy manodidina ny vakim-paritra. Na amin'ny fiakaran'ny fizahan-tany aza dia misy zoro mangingina ao anaty ranomasina izay tsy ahitana olona iray. Na izany aza, ny malaza indrindra amin'ny tora-pasika eo an-toerana amin'ny vanim-potoana fizahan-tany dia be olona, ​​ary any amin'ny hotely malaza indrindra amin'ity nosy ity dia tsy foana ny mahita toerana malalaka.
Ankoatra ny fialantsasatra amoron-dranomasina, misy ny hetsika ara-rano sy ny fanatanjahantena rano. Na dia ao amin'ny Samui aza dia misy endrika maromaro (tantara sy ara-boajanahary) - tempoly, sary Buddha, ala, riandrano. Tena mety amin'ny fisitrandrahana sy ny snorkeling. Raha tiana ho marimarina kokoa, dia tsy dia tsara ho an'ny Koh Samui amin'ireto kilasy roa ireto ny fepetra, fa amin'ny nosy kely akaiky indrindra dia tonga lafatra izany.
Fampitahana an'i Samui sy Phuket
Matetika i Samui dia ampitahaina amin'i Phuket, izay mirefy 250 km miala, fa any amin'ny ilany amin'ny saikinosy. Maro ny mpizahatany no voafetra amin'ny fialan-tsasatra amoron-dranomasina amin'ny iray amin'ireo nosy ireo. Izy ireo dia tena mitovy eraky ny natiora, ny torapasika ary ny toetrandro, fa misy tsy fitoviana lehibe.
Ho an'ny indrindra, ny fotoana tsara indrindra ho an'ny fahatongavana ao Phuket dia ny ririnina, raha i Samui no mitsidika indrindra amin'ny vanim-potoana fahavaratra. Samui ao ambadiky ny Phuket dia azo antsoina hoe milamina kokoa, saingy tsy dia mivoatra kokoa raha ny fotodrafitrasa fialamboly. Ao amin'ny Samui anefa, misy ny fialamboly rehetra ao Phuket (anisan'izany ny mpivaro-tena), fa amin'ny sehatra kely kokoa. Vitsy koa ny mpizahatany vitsy ao Koh Samui noho ny any Phuket. Ambany ny vidiny amin'ny nosy voalohany. Samui dia manana toerana mahasoa kokoa: hita ao amin'ny Hoalan'i Thailand, manana fiarovana azo antoka kokoa amin'ny tsunami mety hitranga. Betsaka ny mpizahatany avy any amin'ny firenena miteny rosianina ao Samui no mahasarika ihany koa fa amin'ity nosy ity dia vitsy kokoa ny mpiray tanindrazana aminy fa tsy ao Phuket.
Torohevitra momba ny fialan-tsasatra amin'ny Koh Samui
Amin'ny ankamaroan'ny trano fandraisam-bahiny ao Samui dia tsy ilaina ny mampiasa rano fisotro na dia hanosotra ny nifinao aza. Tokony hividianana rano tavoahangy ianao.
Rehefa mandeha any Samui amin'ny fiara fitateram-bahoaka sy mitondra entana ianao, dia aza avelanao misy saro-bidy ao anatin'io entana io izay notahirizina ao anaty fitoeran'entin'ny bus. Matetika no mitranga fa mandritra ny fitsangatsanganana fiara fitaterana entana lafo dia tsy hita ao anaty kitapo tavela ao amina fitoerana iray.
Fiantsenana ao Samui
Tsy misy fantsom-pivarotana be dia be amin'ny Samui, fa ny souvenir mahazatra, ary ny solomaso sy ny T-shirt dia azo ovaina sy vidiana eto nefa tsy sarotra. Izany dia azo atao ao amin'ny bazaars, ary koa amin'ireo magazay hita akaikin'ny Chaweng Beach ary ao amin'ny vohitra Nathon. Misy koa ny toeram-pivarotana lehibe: izany no Big C (eo anelanelan'ny morontsirak'i Chaweng sy Bo Put) ary roa Tesco Lotus - ny iray eo anelanelan'ireo torapasika ireo ihany, ary ny faharoa manakaiky ny morontsirak'i Lamai.
Ny tapakilan'ny gara ho any amin'ny toerana rehetra ao Thailandy dia azo vidina amin'ny fitsangatsanganana ao Koh Samui, na izany aza, dia misy fiampangana fanampiny amin'izany. Saingy tao an-tanànan'i Nathon dia azo vidina ny fividianana raha tsy misy ny vaomiera. Mba hanaovana izany, mila tonga any amin'ny biraon'ny Phantip ianao. Ny adiresiny dia 11/4 Moo 3, Taveeradpakdee Rd. 100 metatra miala ny seranan'i Nathon izy, eo akaikin'ny Banky Krungsri.
Biraon'ny fifindra-monina ao Samui
Misy ihany koa ny biraon'ny fifindra-monina eto amin'ity nosy ity, izay ahafahana manitatra visa na fijanonana tsy misy visa, ary koa mamaha olana hafa mifandraika amin'ny fijanonana ao Thailand. Io andrim-panjakana io dia ao amin'ny tanànan'i Lipa Noi, izay misy 2 km miala an'i Nathon, atsimon'ny farany. Adiresin'ny birao: Lalana Thaweeratphakdee, Nathon Moo 3, Tambon Angthong. Izy io manomboka amin'ny 08:30 ka hatramin'ny 16:30 manomboka ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma.
Ao Samui, ny voanjo mony izay maniry amin'ny hazo dia matetika no hita. Amin'ny sokajy dia tsy voalaza fa mikofoka sy hihinana azy ireo, satria raha tsy misy fitsaboana dia misy ranom-boankazo be ny akorany.
Beach Thong Plu
Beach Thong Plu. Tong Plu Beach
Torolàlana Laem Yai
(Pantai Laem Yai) Torolàlana Laem Yai
Lipa Noi Beach na Tong Yang
Reniranon'i Bang Makham